Tartanka quruxda: Maxaa lagu xushay gabadha ugu quruxda badan Soomaaliya? - Radio Maanta FM 95.5MHZ - Amplifying voices from Somalia’s vulnerable communities
Tartanka quruxda: Maxaa lagu xushay gabadha ugu quruxda badan Soomaaliya?
Mowduucan oo si weyn loogu hadal hayay baraha bulshada ee Soomaalida waxaa su’aalo la iska weydiinayay qodobada la fiirinayay marka la dooranayay gabadha ugu quruxda badan.
Isla su’aashaas ayay BBC-du waydiisay Muno Maxamed Diirshe oo ka mid ahayd garsooreyaashii tartanka ee go’aaminayay qofka kaalinta koowaad la siinayo.
Muno oo taas ka hadleysay ayaa tri: “Dhowr nin ayaa ku jiray garsooreyaasha, raggii meesha fadhiyay kaliya ma ahane raggii kale ee lasoo casuumay ayaa meesha dhoobnaa, marti sharafta xitaa waxaa u badnaa rag.”
‘In Soomaaliya ay ka qayb gasho tartanka quruxda’
“Soomaaliya haddii la dhoho baaba’, burbur, qarax, xabad, isdil iyo abaar ayaa kusoo dhacda dadka markii la joogo caalamka. Si loo baddalo wajigaas waxaa lagu dadaalay in Soomaaliya magaceeda iyo calankeeda uu qayb ka noqdo tartanka quruxda Afrika. Quruxda wajiga iyo qofka kaliya ma aha, dalkaaga inuu sharfan yahay oo calankaaga uu asaaggiisa ag yaallo waxay ka mid tahay quruxda,” ayay tiri.